Inona no atao hoe maharitra: toetra sy karazana | Green Renewable
inona no atao hoe maharitra
Portillo Alemanina | 14/04/2022 12:00 | Tontolo_iainana
Mitombo hatrany ny fiantraikan'ny asan'ny olombelona ny tontolo iainana. Toy izany ny tahan’ny fitrandrahana ny harena voajanahary ka tsy manam-potoana havaozina ny tany. Noho izany, teraka ny foto-kevitra momba ny faharetana. Betsaka ny olona tsy mahalala inona no atao hoe maharitra Ary inona no ilaina amin'ny fotoana maharitra?
Noho izany antony izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny atao hoe faharetana, inona ny lafiny sy ny tombontsoa azony ho an'ny fiaraha-monina sy ny tontolo iainana.
1 inona no atao hoe maharitra
2 Hevitry ny faharetana eo amin'ny sehatra sosialy
3 Karazana faharetana
3.1 faharetana ny tontolo iainana
3.2 Fahazarana maharitra ara-toekarena
4 Ohatra momba ny faharetana
Raha tsorina, ny faharetana dia ny fitantanana ireo loharanon-karena mba hanomezana fahafaham-po ny filana ankehitriny nefa tsy mampidi-doza ny filàna ho avy. Ao anatin’izany ny fampandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin’ny rafi-pitantanana. Voalohany, ny faharetana dia mihevitra fa ny natiora sy ny tontolo iainana dia tsy loharanon-karena tsy mety lany izay tsy maintsy arovana sy ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Faharoa, ny fampandrosoana maharitra dia ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny fitadiavana ny fitambaran'ny fiaraha-monina sy ny kolontsaina. Araka izany, mikatsaka ny hahatratra ny haavon'ny kalitaon'ny fiainana, fahasalamana ary fanabeazana mahafa-po. Fahatelo, ny faharetana dia mitondra ny fitomboana ara-toekarena ary miteraka harena ara-drariny ho an'ny rehetra tsy manimba ny tontolo iainana.
Ny faharetana dia faritana ho mameno ny filana ankehitriny nefa tsy mampandefitra ny fahafahan’ny taranaka ho avy mamaly ny filany manokana, miantoka ny fifandanjana eo amin'ny fitomboana ara-toekarena, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fiahiana ara-tsosialy.
Hevitry ny faharetana eo amin'ny sehatra sosialy
Ny faharetana dia modely amin'ny fandrosoana izay mitazona io fifandanjana marefo amin'izao fotoana izao ka tsy manimba ny harenan'ny ampitso. Mba hahazoana azy ilaina ny mampihatra ny fitsipiky ny 3 rs, ny fitsipiky ny 5 rs, ary mampihena ny fako sy ny fako. Amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao no ahafahantsika miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny maripana.
Ny foto-kevitra ankehitriny momba ny faharetana dia niseho voalohany tamin'ny famoahana ny Brundtland Report tamin'ny 1987, fantatra ihany koa amin'ny hoe Our Common Future. ny tontolo iainana. Noho izany, ny Firenena Mikambana dia mikatsaka ny hanome vahaolana amin'ny olana ateraky ny indostrialy sy ny fitomboan'ny mponina.
Ny faharetana dia tafiditra ao anatin'ny foto-kevitra mifandraika amin'izany, toy ny ny fikojakojana ny tontolo iainana, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fiahiana ara-toekarena. Noho izany, ny fanamby maro atrehin'ny olombelona, ​​toy ny fiovan'ny toetr'andro na ny tsy fahampian-drano, dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fomba fijery manerantany sy amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra.
faharetana ny tontolo iainana
Ny faharetan'ny tontolo iainana dia fandaharan'asa miompana amin'ny fiarovana ny zavamananaina tsy mila miala amin'ny fandrosoana ara-toekarena sy sosialy.
Izy io dia manondro ny fahafahan'ny lafiny biôlôjika iray mitazona ny vokatra sy ny fahasamihafàny rehefa mandeha ny fotoana, ka mamporisika ny fandraisana andraikitra amin'ny tontolo iainana mba hiarovana ny harena voajanahary, ary hampiroborobo ny fampandrosoana ny olombelona amin'ny fikarakarana ny tontolo iainany. Betsaka ny orinasa sy orinasa izay mitondra ireo fiovana ireo amin'izao fotoana izao.
Fahazarana maharitra ara-toekarena
Ny faharetana ara-toekarena dia miantoka fa ny asa izay mikatsaka ny fiarovana ny tontolo iainana sy sosialy dia mahazo tombony.
Manondro ny ny fahafahana mamorona harena amin'ny endrika ampy, ny hisian’ny fitoniana eo amin’ny sehatra sosialy samihafa, ny fahefana sy ny famahana ny olana ara-toekarenan’ny mponina, ary ny fanamafisana ny famokarana sy ny fanjifana ny sehatry ny famokarana vola. Raha fintinina dia fifandanjana eo amin’ny olombelona sy ny zavaboary ny fanomezana fahafaham-po ny filana tsy misy fanaovana sorona ny taranaka ho avy.
Mitady ny firaisankina sy ny fitoniana ny mponina ny faharetana ara-tsosialy. Izy io dia manondro ny fandraisana soatoavina izay miteraka fitondran-tena toy ny soatoavina voajanahary, fitazonana a ambaratongam-pampianarana mirindra sy mahafa-po, fanofanana sy fahatsiarovan-tena, manohana ny vahoakan'ny firenena iray mba hanatsara ny tenany sy hihazona fari-piainana tsara, ary hampiroborobo ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara. ireo olona ireo ao amin'izy ireo Mamorona zava-baovao eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny.
Ny faharetana ara-politika dia mikatsaka ny fitondrana misy fitsipika mazava handanjalanjana ny tontolo iainana, ny toekarena ary ny fiaraha-monina. Izy io dia manondro ny fitsinjarana indray ny fahefana ara-politika sy ara-toekarena, ny fanjakana manana fitsipika tsy miovaova, ny fitondrana azo antoka, ny fametrahana rafitra ara-dalàna izay miantoka ny fanajana ny olona sy ny tontolo iainana, ary ny fampiroboroboana ny firaisankina eo amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny faritra mba hanatsarana ny kalitaon'ny fiainany. fiainana Ahena ny fiankinan'ny vondrom-piarahamonina amin'ny famoronana rafitra demokratika.
Ohatra momba ny faharetana
Ireto ambany ireto ny ohatra sasantsasany amin'ny fampandrosoana maharitra mba hampiharana izany hevitra izany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika.
Eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia misy fikambanana samihafa izay izy ireo no mitarika sy manara-dia antsika amin’ny lalana mankany amin’ny fampandrosoana maharitra ary lohahevitra hafa toy ny fiahiana ny tontolo iainana, ny fiakaran’ny maripana, ny fiovan’ny toetr’andro, sns.
Ny Fihaonambe Politika Ambony momba ny Fampandrosoana Maharitra, vokatry ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana Maharitra (Rio+2012) tamin'ny 20, dia nisolo ny Vaomiera momba ny Fampandrosoana maharitra. Ny Forum dia sampan-draharahan'ny Filankevitra ara-toekarena sy sosialy ary ny fivoriambe.
Ny Vaomiera momba ny Fampandrosoana Maharitra dia sampan-draharahan'ny Filankevitra ara-toekarena sy ara-tsosialy ary manana andraikitra voalohany amin'ny olana ara-tontolo iainana rehetra. The Intergovernmental Panel on Climate Change dia fikambanana manam-pahaizana manokana mandinika ny fikarohana siantifika sy mampahafantatra ireo mpanao politika.
Ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny ala dia sampan-draharahan'ny Filankevitra ara-toekarena sy sosialy; Izy io dia manatanteraka ny asan'ireo vatana roa teo aloha voalaza etsy ambany. Programan'ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana (UNEP) no mpitondra tenin'ny tontolo iainana ao anatin'ny rafitry ny Firenena Mikambana. Ny UNEP dia miasa ho toy ny mpanentana, mpanentana, mpanabe ary mpanentana amin'ny fampiasana amim-pahendrena sy fampandrosoana maharitra ny tontolo iainana manerantany.
Araka ny hitanao, ireo lafiny rehetra ireo dia fototry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny toekarena sy ny fiaraha-monina. Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe faharetana sy ny tombony azony ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » inona no atao hoe maharitra